imigaqo yokuziphatha yokuziphatha kakubi
Eyona Ukhuseleko Iimpawu zokuziphatha eziSisiseko sokuziphatha
Iimpawu zokuziphatha eziSisiseko sokuziphatha
Le posti yebhlog sisingeniso kuvavanyo lokungena kunye nokuSebenza ngokuSebenza. Siza kugubungela iziseko zovavanyo lwePen kwaye sichaze ukuba kutheni uvavanyo lokungena lubalulekile kwimibutho.
Siza kugubungela amanqanaba ovavanyo lokungena kwaye sichaze okwenzekayo kwinqanaba ngalinye.
Okokugqibela, siza kujonga ezinye zezixhobo ezisetyenziswa rhoqo kuvavanyo lokungena.
Ukuvavanywa kokungena ngaphakathi-kwiindlela zokuziphatha eziSisiseko
Yintoni ukuSebenza ngokuGwenxa?
Xa sicinga ngokuGawula, sihlala sisinxulumana nemisebenzi engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho. Xa isigebenga sihlasela inkqubo, sikwenza oko ngaphandle kolwazi kunye nemvume yomnini wenkqubo. Ngokulula, kufana nokungena endlwini yomntu ngaphandle kwemvume epheleleyo yomnini kunye nesivumelwano sangaphambili.
Ukuziphatha kakubi, kwelinye icala, kusaqhubeka nokuqhekeza. Kubandakanya ukuqokelela ulwazi malunga nenkqubo, ukufumana izithuba kunye nokufikelela. Nangona kunjalo, ekuziphatheni okubi, umvavanyi wepen has_ imvume kunye nemvume epheleleyo _ yomnini wenkqubo. Ke ngoko, umsebenzi uba kukuziphatha, okt wenziwe ngeenjongo ezilungileyo.
Abathengi basebenzisa abahlaseli bokuziphatha ukuphucula ukhuseleko.
Yintoni uVavanyo lokuNgena?
Ukuvavanywa kokungena ngaphakathi kubandakanya ukulinganisa uhlaselo lokwenyani ukuvavanya umngcipheko onxulumene nolwaphulo olunokubakho.
Ngexesha lokuvavanywa kwepen, abavavanyi basebenzisa izixhobo ezahlukeneyo kunye neendlela zokufumana ubungozi. Baya kuthi emva koko bazame ukuxhaphaza ubuthathaka ukuze bavavanye ukuba ngabahlaseli abanokufumana ntoni emva kokuxhatshazwa okunempumelelo.
Kutheni uvavanyo lokungena phakathi luyimfuneko?
Kule minyaka idlulileyo, kuye kwakho ukonyuka rhoqo kwenani lezisongelo ze-cyber kunye nemisebenzi yolwaphulo-mthetho ebandakanya iTekhnoloji yoLwazi. Amashishini kufuneka enze uvavanyo lokuba sesichengeni rhoqo kunye novavanyo lokungena ukuze achonge ubuthathaka kwiinkqubo zawo. Banokuthi emva koko basebenzise amanyathelo afanelekileyo okukhusela iinkqubo zabo kubahlaseli abakhohlakeleyo.
Ngubani owenza uvavanyo lweepen?
I-Ethical hackers ngabantu abaqhelekileyo abaqhuba uvavanyo lokungena.
Ukuze ubambe isela, kuya kufuneka ucinge njengenye.
Kukwanjalo nakuhambo lweenqobo ezisesikweni.
Ukuze ufumane kwaye ulungise imingxunya yokhuseleko kwinkqubo yekhompyuter, kuya kufuneka ucinge njengomgculeli onobubi. Uya kusebenzisa amaqhinga afanayo, izixhobo, kunye neenkqubo abanokuzisebenzisa.
I-hacker yokuziphatha isebenzisa izixhobo ezifanayo kunye nobuchule obunokusetyenziswa lulwaphulo-mthetho. Kodwa Benza njalo ngenkxaso kunye nokuvunywa ngokupheleleyo ngumthengi, ukwenzela ukunceda ukukhusela inethiwekhi okanye inkqubo.
Ukuvavanywa kokungena ngokuchasene noVavanyo loKhuseleko
Uvavanyo lokuba sesichengeni luvavanya ii-asethi eziveziweyo (inethiwekhi, iseva, usetyenziso) lobungozi. Icala elisezantsi lokuvavanywa komngcipheko kukuba uhlala unika ingxelo ngeempembelelo zobuxoki. Ukunyusa ubuxoki kunokuba luphawu lokuba ulawulo olukhoyo alusebenzi ngokupheleleyo.
Ukuvavanywa kokungena kungena kwelinye inyathelo kwaye kujonge ubuthathaka kwaye kuya kuzama ukubaxhaphaza.
Iindidi zovavanyo lokungena
Uvavanyo lokungena ngeBhokisi emnyama
Kuvavanyo lokungena kwebhokisi emnyama, umvavanyi akanalo ulwazi lwangaphambili malunga nethagethi. Oku kufanisa ngokusondeleyo uhlaselo lwehlabathi lokwenyani kunye nokunciphisa iimpembelelo zobuxoki.
Olu hlobo lovavanyo lufuna uphando olunzulu kunye nokuqokelelwa kolwazi kwinkqubo ekujoliswe kuyo / kwinethiwekhi. Ihlala ichitha ixesha elininzi, umgudu, kunye neendleko zokwenza uvavanyo lokungena kwebhokisi emnyama.
Uvavanyo lweGrey-Box lokungena
Kuvavanyo lokungena kwebhokisi engwevu, umvavanyi unolwazi olulinganiselweyo okanye oluyinxalenye malunga nezixhobo ekujoliswe kuzo. Banolwazi malunga neendlela zokhuseleko ezikhoyo.
Oku kulinganisa uhlaselo lomntu ongaphakathi okanye umphangi wangaphandle onalo ezinye Ulwazi okanye amalungelo kwinkqubo ekujoliswe kuyo.
Uvavanyo lokuNgena ngeBhokisi emhlophe
Kuvavanyo lokungena kwebhokisi emhlophe, abavavanyi banolwazi olunzulu olunzulu malunga nezixhobo ekujoliswe kuzo. Bayazi ngeendlela zokhuseleko ezikhoyo. Oku kwenza ukuba uvavanyo lukhawuleze kakhulu, lube lula, kwaye lungabizi kakhulu.
Oku kulinganisa uhlaselo olunokwenzeka ngaphakathi ngaphakathi onolwazi olupheleleyo kunye namalungelo kwinkqubo ekujolise kuyo.
Kolu hlobo lokuvavanya, wonke umntu uyazi ukuba uvavanyo luza kuqala nini. Abasebenzi be-IT iqela lenethiwekhi, kunye neqela lolawulo bonke banolwazi lwangaphambili lomsebenzi wovavanyo lweepeni.
Kolu hlobo lovavanyo, abasebenzi be-IT kunye namaqela enkxaso abanalo ulwazi lwangaphambili lomsebenzi wokuvavanya usiba.
Ngabaphathi abaphezulu kuphela abaziyo ngeshedyuli yovavanyo. Olo vavanyo luyanceda ukumisela ukuphendula kwe-IT kunye nabasebenzi benkxaso kwimeko yohlaselo lokhuseleko.
Ukuvavanywa kokungena okuzenzekelayo
Kuba uvavanyo lokungena lubandakanya imisebenzi emininzi kwaye indawo yommandla wohlaselo ikwanobunzima ngamanye amaxesha, ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukusebenzisa izixhobo ukwenza imisebenzi emininzi isebenze.
Esi sixhobo siza kusebenza ngokuchasene nezixhobo ezenziwa rhoqo kwaye emva koko sabelane ngeengxelo namaqela achaphazelekayo ukulungisa le micimbi.
Icala elisezantsi lokusebenzisa izixhobo ezizenzekelayo kukuba baya kujonga kuphela ubungozi obuchazwe kwangaphambili ngenxa yoko banika ingxelo ngeempembelelo zobuxoki.
Kananjalo ayinakho ukuphonononga uyilo kunye nokudityaniswa kwenkqubo kwimeko yezokhuseleko. Nangona kunjalo, kufanelekile ukuskena iithagethi ezininzi ukuphindaphinda kunye nokuncedisa kuvavanyo olwenziweyo.
Ukuvavanywa kokungena ngesandla
Kuvavanyo olwenziwayo, umvavanyi usebenzisa ubuchule bakhe kunye nezakhono ukuze angene kwinkqubo ekujolise kuyo. Umvavanyi unokwenza uphononongo loyilo kunye neminye imiba yenkqubo ngokubonisana namaqela afanelekileyo. Ukuvavanya ukhuseleko olupheleleyo, kungcono ukusebenzisa indibaniselwano yovavanyo oluzenzekelayo kunye nolwesandla.
Amanqanaba ovavanyo lokungena
Ukuvavanywa kwepen kuqala kwisigaba sangaphambi kokuzibandakanya. Oku kubandakanya ukuthetha nomthengi malunga neenjongo zabo zovavanyo lwepeni kunye nokwenza imephu kwindawo yovavanyo.
Umxhasi kunye nomvavanyi wepeni njengemibuzo kunye nokuseta okulindelweyo.
Abanye abathengi babeka imida kububanzi bemisebenzi.
Umzekelo, umxhasi unika imvume kumvavanyi ukuba afumane ukuba sesichengeni sedathabheyisi, kodwa hayi ukulanda idatha ebuthathaka.
Isigaba sangaphambi kokuzibandakanya sikwabandakanya ezinye iinkcukacha, ezinje ngefestile yovavanyo, ulwazi loqhakamshelwano kunye nemigaqo yokuhlawula.
Kwinqanaba lokuqokelela ulwazi, abavavanyi beepeni bafuna ulwazi olufumanekayo esidlangalaleni malunga nomthengi kwaye babone iindlela ezinokubakho zokunxibelelana neenkqubo zabaxumi.
Abavavanyi baqala ukusebenzisa izixhobo ezinjengezikena zezibuko ukufumana umbono wokuba zeziphi iinkqubo ezikhoyo kunethiwekhi yangaphakathi kunye nokuba yeyiphi isoftware eqhubayo.
Kwisigaba sokumisela isoyikiso, abavavanyi basebenzisa ulwazi oluqokelelwe kwisigaba esidlulileyo ukumisela ixabiso lokufumana ngakunye kunye nefuthe kumthengi ukuba oko kufunyanisiweyo kuvumela umhlaseli ukuba angene kwinkqubo.
Olu vavanyo luvumela ipentester ukuba iphuhlise isicwangciso sokwenza kunye neendlela zokuhlasela.
Phambi kokuba abavavanyi bePen baqalise ukuhlasela inkqubo, benza uhlalutyo lokuba sesichengeni. Apha, abavavanyi bePen bazama ukufumanisa ubuthathaka kwiinkqubo ezinokuthi zithathe ithuba kwisigaba esilandelayo.
Kwinqanaba lokuxhaphaza, abahloli bePen baqala ukuxhaphaza ngokuchasene nenkqubo ekujoliswe kuyo. Basebenzisa ubuthathaka obufunyenwe ngaphambili kumzamo wokufikelela kwiinkqubo zabaxumi. Baza kuzama izixhobo ezahlukeneyo kunye nendlela yokungena kwinkqubo.
Emva kokuxhaphaza, abavavanyi bavavanya ubungakanani bomonakalo onokwenziwa kusetyenziswa into ethile. Ngamanye amagama, bavavanya umngcipheko.
Umzekelo, ngexesha lovavanyo lwepeni, abavavanyi bayonakalisa inkqubo yomthengi. Ngaba oko kungenelela kuthetha okuthile kumthengi?
Ukuba uphule kwinkqubo engabonakalisi naluphi na ulwazi olubalulekileyo lomdla kulowo uhlaselayo, emva koko ke uza kuthini? Obo bungozi bokuba semngciphekweni buphantsi kakhulu kunokuba ubunakho ukuxhaphaza inkqubo yophuhliso lwabathengi.
Inqanaba lokugqibela lovavanyo lokungena kukunika ingxelo. Kweli nqanaba, abavavanyi bePen badlulisa iziphumo zabo kumthengi ngendlela enentsingiselo. Ingxelo yazisa umthengi ngento abayenzayo ngokuchanekileyo kwaye apho bafuna ukuphucula imeko yabo yokhuseleko.
Ingxelo inokubandakanya iinkcukacha zoxhaphazo ngalunye kunye nemilinganiselo yokulungisa.
Izixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ukuVavanya ukungena
Izixhobo ezibini eziqhelekileyo ezisetyenziswa ngexesha lokuvavanywa kwepen zi Imephu kwaye Ukufundwa .
Zombini ezi zixhobo zinokubonelela ngobutyebi bolwazi kwinkqubo ekujoliswe kuyo.
I-Kali Linux kukhuseleko oluhlaselayo lubandakanya nezinye izinto ezininzi izixhobo isetyenziswe kwizigaba ezahlukeneyo zokuvavanya.
nini umcimbi kaGoogle
Iwotshi yeapile ihlala iboniswa
Ingxelo yakutshanje ye-Apple ithi ii-AirPods 3 kunye ne-AirPods Pro 2 iza ngo-2021, ii-AirPods X zisenokuba zezokubetha
Uhlaziyo lweMaphu zikaGoogle zenza kube lula ukuhamba eNew York nakwezinye iidolophu ezinkulu ezintathu
Isamsung iqala ukuvuselela i-10.1-intshi yeGalaxy Tab kwi-Android 5.0.2 Lollipop
Iapile kunye neapos; i-9.7-intshi ye-iPad (imodeli yamva nje) iyathengiswa kwiBest Buy kwi-32 kunye ne-128GB eyahlukileyo
Ngaba kufanelekile ukuba iApple ivumele abasebenzisi be-iPhone ukuba bakhuphele usetyenziso ngaphandle kweVenkile yeApple?
I-Twitter ivavanya into evumela umbhali we-tweet ukuba afihle iimpendulo
I-iPhone XS Max yeyona fowuni inzima ye-Apple eyakha yakho
Node.js-Molo weHlabathi yoMzekelo weServer ye-HTTP
Amaxabiso e-iCloud athelekiswa: loluphi ucwangciso lokugcina ekufuneka ulufumene?
Awona matyala eSpigen aPhambili kwi-iPhone 12. ISpigen igcina iiapile zakho zigqunyiwe